Nhau - Iwo Akanaka Bvudzi Brashi reKugadzira Yako Mane
Wese munhu anoda bvudzi rakanaka bvudzi. Kunyangwe iri kutora mamwe mapfundo kunze kana kungopa vhudzi rako chimwe chimiro chekuwedzera, chishandiso chakasiyana-siyana chakakosha pakutaridzika zvakanaka. Ehezve, kana iwe uri pakutsvaga imwe nyowani, ipapo iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana iyo yakanyatsogadzirwa uye ichagara.
Bvudzi bhurasho ravepo kwemazana emakore — zvakaringana kureba sekunge vanhu vanga vachida kugadzira vhudzi ravo neimwe nzira yechiitiko chakakosha. Asi zvakatozosvika muna 1777 ndipo pakavhurwa mugadziri wekutanga webvudzi kuEngland, Kent, izvo zvakabatsira kugovera chishandiso ichi uye kuchiita kuti chiwanikwe zvakanyanya. Ikozvino, kune ese marudzi ese emusiyano pane fomula: padhaya mabhurashi, akakomberedza mabhurashi, ekudzikisira mabhurashi uye nezvimwe. Kune zvakare akasiyana marudzi akasiyana emabhurashi bristles - angave echisikigo kana ekugadzira.
Iyo bhurashi raunoda rinoenderana zvachose nekutarisisa kwauri kuenda uye nemavara ebvudzi rako. Pano, ina akanakisa ekutora kubva kuAmazon.
1. Kent Beechwood Cushion Paddle Brush
Kent anga achigadzira bvudzi mabhurusi kwemazana emakore izvozvi, saka zvine musoro kuti chipiriso chavo chenguruve chiri pakati pezvakanakisa. Yakagadzirirwa kubatsira kumisikidza ako chaiwo mairi anogadzirwa neganda rako mukati mebvudzi rako rese, kurichengeta riine hutano nekusimudzira kukura. Ehe, izvo zvakare zvinobatsira kubvisa tambo dzakarasika dzinogona kunge dzakaunganidzwa muswere wese wezuva. Mubato webeechwood unowedzera kubata kwakanaka, zvakare.
2. Sonvera Boar Bristle Bvudzi Bhurasho reVarume
Kana iwe uri mhando yekuda kugadzirisa vhudzi rako uri pakati pemisangano, saka bhurasho raSonvera nderako rako. Iyo bhandi bhurashi rinoita mushe mushe, asi rinouyawo nebhegi rekufamba, kuti iwe ugone kuitora pamwe newe kwese kwaunoenda. Iwo bristles pachawo akagadzirwa akachena enguruve mvere, ayo anobatsira kufambisa zvakasikwa mafuta kubva mumusoro wako-uye anogona kukama kuburikidza neakakora, akakombama bvudzi pamwe nebvudzi rakatwasuka. Iko kune kunyange bharashi rekuchenesa rakakandirwa mumusanganiswa, izvo zvinobatsira kuita kwese kwechishandiso.
3.Kingston Grooming Kambani Wave Wave Brush yeVarume
Iwe unogona kushandisa chero bvudzi bvudzi pane ndebvu dzako, dzidziso. Asi mazhinji akanyanya kukura pairi, uye achanzwa akaomesesa mukuita. Hazvina kudaro kuna Kingston Kushambidzika Bhurasho rekambani, iro rinokwana zvirinyore muruoko rwako uye rinogona kushandisa zvese kune iro bvudzi riri pamusoro wemusoro wako nebvudzi pachirebvu chako. Iri bhuroshi remuti webeech rine bvudzi bristles-bristles akasimbiswa zvakanyanya, saka haazodonhe. Iyo dhizaini inofungidzirwawo zvakanaka, sezvo yakakombama kunombundira makona echiso chako nemusoro uye muzinga kuburikidza nevakawanda bvudzi sezvinobvira.
4. Belula Boar Bristle Bvudzi Bhurasho reVarume
Nyowani kune nyika yekutarisira bvudzi? Iwe uchazoda yakakwana seti senge yaBelula panguva iyoyo, iyo inouya neinongori bhurasho rebvudzi asi muzinga wemuti, mabhurashi maviri emichindwe uye bhegi rekufamba. Muzinga wakanakira kuseka tangi dzakaomarara (uye kuchenesa bhurasho), uye mabhurasho emichindwe anoshanda zvakanaka kune ndebvu. Iyo bhurashi yenguva dzose pachayo, zvakadaro, inogadzirwa neye organic zvigadzirwa: yakasikwa rabha, boar bristles uye bamboo. Rongedza chinhu chose mubhegi rekukweva uye unogona kuenda nacho kwese kwaunoenda.